ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ၀၉၊ ၀၆၊ ၀၉ ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကို တုံ့ပြန်ချက်
တောက်...မင်းဟာဖတ်လိုက်မှပဲ ငါ့ဒေါသတွေတလိပ်လိပ် တက်လာပြန်ပြီ။ ရင်းရတာမတန်လိုက်တာ(တစ်ဘ၀)။
PEOPLE JUSTIC said...
KyawMoe Naing said...
What have you done yourself?
that's good . very best author.
this way is right.
မှန်လိုက်လေခြင်း ပါ ဒကာဒို....တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့သီတာ၊ ဧယင်ကျူးတာ မဟုတ်ပါကြောင်း
်ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်..ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကရော ဘယ် အခန်း ကဏ္ဍက ပါဝင်ဆောင် ရွက်နေပါသလဲ...ကျာမြီးကို ရဲရဲဆွဲ နိူင်တဲ့အဆင့် မှာ ရှိပါသလား သိပါရစေ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလုသား ပါ အမှားအယင်းတွေ ရှိမှာပါ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ဟာဒါတွေပြောရမဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘုး အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကို နားလည်ပါ
လုထု လှုပ်ရှား မုလို အပ် နေ ချိန်မှာ လုထု နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြား မသိမသာ သွေး ခွဲ တာ လား
ဒီဆောင်းပါးေ၇းသူနဲ့ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးသူ လွဏ်းဆွေ တို့ ၇ဲ့၇ည်၇ွယ်ချက်ဟာ NLD နဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ပြည်သူတွေ အထင်လွဲစေ၇န်
သူတို့ သာ အဖမ်းမခံ၇ဲလို့ အပြင်ထွက်ပြေးလာကြတာ။
ဒီမိုကရေစီလုပ်သူအချင်းချင်း ဝေဖန်တာနဲ့ နအဖနဲ့ ပေးစားတတ်ကြတာ ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားကိုင်စားတွေရဲ့ စောက်ကျင့်တခုပါပဲ။ Thaung တို့လို လေနဲ့ဝမ်း မကွဲသူတွေ များနေလို့လဲ ဒီမိုကရေစီမရပဲ ဖန်ပဲခင်နေရတာ အနှစ် ၂၀ ရှိပြီလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လေးစားကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ မပေါက်ရင်တော့ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀၀၊ ၂၀၀၀ ……………… ။ ဝေဖန်သင့်တာ ဝေဖန်ခြင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စေတနာထားလို့သာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် စာနာလို့သာဖြစ်တယ်။ လုပ်စားကိုင်စားတွေလို ဘေးနားကပဲဖြစ်ဖြစ် အဝေးကပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးမှန်ပါ၏။ အားလုံးဟုတ်ပါ၏ အန်တီ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခုတုံးလုပ် အသုံးချ ကိုယ်ကျိုးရှာပြီး ချောက်ထဲတွန်းချနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုနားလည်။ အနှစ် ၂၀ ကြာခဲ့ပြီ။ အခုအထိ မမှတ်သေးဘူးလား။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေလိုနေလဲ။ ဘာတွေမှားနေလဲ ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းလေး မွေးမြူကြစမ်းပါ။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လု တိုင်း သိ တယ် ဝေဖန် သင့်တာ ဝေဖန် ၇မယ် ဆိုတာ လည်း လု တိုင်း သိ တယ် ဒါပေမဲ့ အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကို နားလည်၇ မယ် လုထု လှုပ်ရှား မု အ ရေး တကြီး လို အပ် နေ ချိန်မှာ ဒီ လို ဆောင်း ပါး တွေ အချိန် ကိုက် ပေါ် လာ တာ မရိုး သား ဘုး စေတနာ ဆို တဲ့ စကား လုံး ကို ခု တုံး လုပ် ပြီး မ ကောက် ကျစ် နဲ့ ဖြု စင် တဲ့ ထမင်း တစ် လုပ် ရှာ စား နိုင် ပါ စေ
လူချင်းလဲမမြင်ဖူးဘူး...ပထမဆုံးအကြိမ်ဘလော့ပေါ်လာေ၇းဘူးတဲ့ ကျနော့်ကို ယဉ်ကျေးစွာ ဝေဖန်လိုက်ပုံကတော့ အနာပေါ် ဒုတ်ကျသွားတယ်လို့ဘဲ ယူဆပါတယ်။ taw တို့လို အဆင့်မြင့်မြင့် မဝေဖန်တတ်လို့ ဝေးဝေးကဘဲနေပါတော့မယ်။ ဒီမိုကေ၇စီ ၇ဖို့အတွက် အခုလိုဘဲ ဆက်လက်ဝေဖန်နိုင်ပါစေလို့.....။
လူချင်းလဲမမြင်ဖူးဘူး...ပထမဆုံးအကြိမ်ဘလော့ပေါ်လာေ၇းဘူးတဲ့ ကျနော့်ကို ယဉ်ကျေးစွာ ဝေဖန်လိုက်ပုံကတော့ အနာပေါ် ဒုတ်ကျသွားသလိုဘဲ။ taw တို့လို အဆင့်မြင့်မြင့် မဝေဖန်တတ်လို့ ဝေးဝေး ကဘဲနေပါတော့မယ်။ ဒီမိုကေ၇စီ ၇ဖို့အတွက် အခုလိုဘဲ ဆက်လက်ဝေဖန်နိုင်ပါစေလို့.....။
Is he pro- or anti- government?
If you love the people,
come and stay together with people..
and work for them whatever you can....
the people from burma need you more than US people do.
who is htin Aung Kyaw ?
please, , let me know about him...
if someone know
အရမ်းကောင်းတဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ နိုင်ငံရေးသတင်းတွေ စုံလင်စွာကြည့်လို့ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ